Xildhibaan Dalxa: Waxaa Beesha 5-aad lagu matalayaa dagmooyinkii ay ku badnaayeen – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka, ayaa kalfadhi u sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo qaar ka mid ah Dowlad Goboleedyada ay cadaalada darro weyn ku sameeyaan beesha 5-aad ee looyaqaano .5-ka, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaa (Besha 5-aad) lagu matalayaa dagmooyinkii ay ku badnaayeen, waana loo awood sheegtaa xili kasta” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa.
Maxamed Cumar Dalxa waxa uu sheegay in Dowladda Farmaajo ay xoojisay wuxuu ugu yeeray “cadaalad darrada” lagu hayay dadka loo awood sheegto ee dagan gobalka Banaadir iyo labada Shabelle. “Majirto wax aan qarinayo, cadaaladna kuma dhisna maamuladda ka jira dagmooyinka Afgooye, Xamar-Jajab, Boondheere, Cabdicasiis, Waabari iyo Shibis” ayuu yiri Xildhibaanku. “Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay ahayd in ay la tashato Xildhibaannada matala dadka ay maamulada u magacaabayso” ayuu hadal kiisa ku daray.
Intaas waxa uu sii raaciyey Xildhibaanku in deegaan-doorashadiisa Afgooye ay ka taagan tahay xaalad aad u adag, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaa ka taagan dagmada Afgooye dhac, handadaad iyo isbaarooyin, dadka dhibkaas lagu hayana maamulka dagmada kuma lahan matalaad” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa. Waxa uu sheegay in dhawr jeer ay la hadleen Wasaaradda Arrimaha Gudaha, laakiin aysan waxba uga soo bixin. “Waan ku daalnay talo iyo hadal, laakiin waxaa fiican in lagaa qaadanayo talada” ayuu Xildhibaanku ku yiri Kalfadhi.
Hadalkiisa ayaa imaanaya waqti todobaadyadii ugu dambeeyey ay DFS Guddoomiyayaal u magacaabeysay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir, iyadoo kuwo horay u haayey xilkaas laga qaadayey ama loo wareejinayey degmooyin kale. Dowladda Farmaajo ayaa ku guuleysatay in degmooyinka gobolka Banaadir, oo habka loo magacaabo maamuladooda ay ka maquuto in lagu saleeyo qabiil, ay u magacwday madax beel ahaan (marka loo fiiriyo 4.5-ka) ka tirsan kuwo aan markii hore xilal ka heli jirin degmooyinka gobolka Banaadir.
Xildhibaan Axmed Fiqi: Isma-qabatee Kala Daaya!